ကမ္ဘာတလွှား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်မှု ၇ သန်း ကျော်လာ | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင္း နိုင်ငံတကာသတင်း ကမ္ဘာတလွှား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်မှု ၇ သန်း ကျော်လာ
MOSCOW, RUSSIA - JUNE 2, 2020: A nurse inaward at the RZD Medicine chain's Semashko Hospital for COVID-19 patients in Stavropolskaya Street. Stanislav Krasilnikov/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ìåäèêè è ïàöèåíòû â îòäåëåíèè ðåàíèìàöèè è èíòåíñèâíîé òåðàïèè (ÎÐÈÒ) ñòàöèîíàðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ÖÊÁ "ÐÆÄ-Ìåäèöèíà" èìåíè Í.À. Ñåìàøêî íà Ñòàâðîïîëüñêîé óëèöå, ãäå îêàçûâàþò ïîìîùü ïàöèåíòàì ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ
ကမ္ဘာတလွှား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ် ကူးစက်မှု ၇ သန်း ကျော်လာ
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အခြေစိုက် ဂျွန်ဟော့ပ်ကင်း တက္ကသိုလ်ရဲ့ အချက်အလက်တွေအရ ဒီနေ့ ဇွန်လ ၈ ရက် မနက်ပိုင်းအထိ ကမ္ဘာတလွှား ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်မှု ၇ သန်းကျော် ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အမေရိကန်က COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှု ၁ ဒသမ ၉ သန်းကျော်နဲ့ အများဆုံး၊ ဘရားဇီးက ၆၉၀၀၀၀ သိန်းကျာ်နဲ့ ရုရှားက ၄၆၀၀၀၀ ကျော် အသီးသီး ရှိနေပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါ ကူးစက်မှု အများဆုံးက အမေရိကန် ဖြစ်ပြီး သေဆုံးသူ ၁၁၀၀၀၀ ကျော် ရှိကာ သူ့နောက်မှာကတော့ ဘရာဇီးနဲ့ ရုရှားက ကူစက်မှု၊ သေဆုံးမှု အများဆုံး ဖြစ်ကြပါတယ်။
ကမ္ဘာတလွှား COVID-19 ရောဂါကြောင့် သေဆုံးသူကတော့ ၄၀၂၀၀၀ ကျော်၊ ရောဂါကနေ ပြန်လည် သက်သာလာသူ ၃၁၃၀၀၀၀ ကျော် ရှိပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် နောက်ဆုံး ကူစက်ခံရတဲ့နိုင်ငံကတော့ လီဆိုသို ဖြစ်ပြီး ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်သူ ၄ ဦးတွေရှိပေမယ့် သေဆုံးသူ မရှိသေးပါဘူး။
ကိုရိုနာဗိုငြးရပဈြ ဖှဈပှားမှုကို ၂၀၁၉ ခုနှဈ၊ ဒီဇငဘြာလက တရုတနြိုငငြံ၊ ဝူဟနပြှညနြယမြှာ စတငြ တှေ့ရှိတာဖှဈပှီး လအနညြးငယအြကှာမှာ ကမျဘာတဈဝနြး ပွံ့နှံ့ခဲ့ပါတယြ။ ကိုရိုနာဗိုငြးရပဈြကှောင့ြ ခပခြှာခှာနရတော၊ မှို့ပှတှေ lockdown ခရွတာ၊ စီးပှားရေးအကှပအြတညြး ကှုံရတာနဲ့ လူသနြးပေါငြးမွားစှာ အလုပလြကမြဲ့ဖှဈတာတှေ ကှုံနရပေါတယြ။ COVID-19 ရောဂါကို ကပရြောဂါအဖှဈ ၂၀၂၀ ပှညနြှဈ၊ မတလြ ၁၁ ရကနြေ့မှာ ကမျဘာ့ကနွြးမာရေးအဖှဲ့ (WHO) က ကှညောခဲ့ပါတယြ။ ကိုရိုနာဗိုငြးရပဈြ ကာကှယကြုသနိုငမြယ့ြ ဆေးလညြး စမြးသပနြကှဆေဲ ဖှဈပါတယြ။
MOSCOW, RUSSIA – JUNE 2, 2020: A nurse inaward at the RZD Medicine chain’s Semashko Hospital for COVID-19 patients in Stavropolskaya Street. Stanislav Krasilnikov/TASS Ðîññèÿ. Ìîñêâà. Ìåäèêè è ïàöèåíòû â îòäåëåíèè ðåàíèìàöèè è èíòåíñèâíîé òåðàïèè (ÎÐÈÒ) ñòàöèîíàðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ÖÊÁ “ÐÆÄ-Ìåäèöèíà” èìåíè Í.À. Ñåìàøêî íà Ñòàâðîïîëüñêîé óëèöå, ãäå îêàçûâàþò ïîìîùü ïàöèåíòàì ñ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèåé. Ñòàíèñëàâ Êðàñèëüíèêîâ/ÒÀÑÑ
ကမ်ဘာတလှှား ကိုရိုနာဗိုငျးရပျ ကူးစကျမှု ၇ သနျး ကြောျလာ
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ဖြစ်ပွားမှုကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလက တရုတ်နိုင်ငံ၊ ဝူဟန်ပြည်နယ်မှာ စတင် တွေ့ရှိတာဖြစ်ပြီး လအနည်းငယ်အကြာမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ခပ်ခွာခွာနေရတာ၊ မြို့ပြတွေ lockdown ချရတာ၊ စီးပွားရေးအကြပ်အတည်း ကြုံရတာနဲ့ လူသန်းပေါင်းများစွာ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်တာတွေ ကြုံနေရပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကို ကပ်ရောဂါအဖြစ် ၂၀၂၀ ပြည်နှစ်၊ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့မှာ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ (WHO) က ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ကာကွယ်ကုသနိုင်မယ့် ဆေးလည်း စမ်းသပ်နေကြဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Previous articleထရမ့်ဟိုတယ် အပြင်ဘက်မှာ ဆန္ဒပြသူ ထောင်ပေါင်းများစွာ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ဆန္ဒပြ
Next articleအီတလီက ပြန်လာသူတစ်ဦးထံမှာ COVID-19 ရောဂါတွေ့ရှိ